သွေးမြေမကျစေချင်ပါ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
September 28, 2007, 11:06 am Filed under: Shameless Groups မြန်မာပြည်ရှိအခြေအနေတွေအားလုံး ရုတ်တရက် မထင်မှတ်ဘဲ ပေါက်ကွဲမှုတွေ ဖြစ်သွားချိန်မှာ ကျွန်မကလည်း ကံဆိုးစွာ စင်္ကာပူရှိရဲတွေက ကျွန်မအိမ်ကို လာပြီး ကျွန်မသုံးတဲ့ ကွန်ပြူတာ ၊ ကော်နက်ရှင်ကြိုးတွေ ၊ စီဒီတွေကအစ အားလုံးကို လာသိမ်းသွားပါတယ် .. ။ ဘာလို့သိမ်းသွားလဲဆိုတော့ စင်္ကာပူမှာ လမ်းလျှောက်ပွဲလုပ်တာ ကျွန်မက သတင်းဖြန့်ဝေသူဖြစ်နေလို့ပါပဲ . .. ။ အခုထိ ကျွန်မ ကွန်ပြူတာကို လာမပေးသေးတဲ့အတွက် ကျွန်မ ရေးချင်တာ မရေးရ ၊ ဖတ်ချင်တာ စိတ်ကြိုက် မဖတ်ရနဲ့ တနုံ့နုံ့ဖြစ်နေရတာပါ .. ။ နိုင်ရာလေးတွေ လုပ်ပေးရင်း ရသလိုတော့ ကြိုးစားရေးနေဆဲပါပဲ .. ။
နောက်မဆုတ်သေးတဲ့ အာဏာရှင်နဲ့ လက်ပါးစေတွေအားလုံးက ၈၈အရေးအခင်းလိုတော့ အာလူး လုပ်လို့ မရတော့တာတော့ အမှန်ပါပဲ .. ။ ဂျပန်တစ်ဦးသေသွားတဲ့အတွက်တော့ ဂျပန်က မြန်မာပြည်ကို ပိုပြီး ဖိအားပေး ၊ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့တော့ အဆိုးထဲက အကောင်းအဖြစ် မျှော်လင့်မိပါတယ် .. ။
Oh dear.. I’m sorry you don’t have your computers. Hopefully this case against you will be nothing. I actually tried to warn the people walking that this was illegal in Singapore (you know they don’t play around either). 😦 hope everything gets resolved son.
September 28, 2007 @ 11:48 am Reply	Please pass this on.
September 28, 2007 @ 12:55 pm Reply	စင်ကာပူရဲ့ အာဏာရှင် စနစ်ကို ကြည့်မရျာ ကြာပြီ။
September 29, 2007 @ 8:20 pm Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI